२ सय १८ जनाको हुलमा छन् संक्रमित, दैलेखको कोरोना संकट नियन्त्रणबाहिर - Birgunj Sanjal२ सय १८ जनाको हुलमा छन् संक्रमित, दैलेखको कोरोना संकट नियन्त्रणबाहिर - Birgunj Sanjal२ सय १८ जनाको हुलमा छन् संक्रमित, दैलेखको कोरोना संकट नियन्त्रणबाहिर - Birgunj Sanjal
२ सय १८ जनाको हुलमा छन् संक्रमित, दैलेखको कोरोना संकट नियन्त्रणबाहिर
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार २०:१४
दैलेख | सदरमुकाम दैलेख बजारस्थित नारायण क्याम्पसको क्‍वारेन्टाइनमा १२ दिनदेखि बस्दै आएका २ सय १८ जना केही नलागेपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सोमबार दिउँसो सम्मको रिपोर्टलाई आधार मान्‍ने हो भने उत्त क्‍वारेन्टाइनमा ३४ जनाको पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ। रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको आइतवारका १७ र सोमबार १७ जना गरेर ३४ जना अहिले पनि २ सय १८ जनाकै हुलमा छन्।
कुन व्यक्ति हो भनेर पहिचान गर्न एक दिन लागेको छ। पहिचान गरेर छुट्टाउने काम सोमबार साँझसम्म पनि हुन नसकेपछि क्‍वारेन्टाइन भित्र बसेकाहरुले संक्रमितलाई छुट्टै राख्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
अवस्था बिकराल बन्दै जान थालेपछि नारायण क्याम्पसको क्‍वारेन्टाइननै सिल गर्नुपर्ने स्वावस्थ्यकर्मीहरुले सुझाव दिएपछि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापा, नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्का, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा. निरन्जन पन्त र सुरक्षाकर्मीको टोलीले केही बेर काउन्सिलिङ गरेका थिए।
तर अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । अपरान्ह ४ बजेदेखि नारायण क्याम्पसको क्‍वारेन्टाइनमा बसेकाहरुले नाराजुलुस गर्दै आफ्नै घरमा गएर मर्छौं भनिरहेका छन्। उनीहरु झोला बोकेर एकाएक क्‍वारेन्टाइनबाट निस्केका छन् । १ घण्टाजति सडकमा निस्केका उनीहरुरुलाई सम्झाई बुझाई पुनः क्‍वारेन्टाइन भित्र राख्ने काम सुरु गरिएको छ।
अधिकांशको रिपोर्ट शंकास्पद आएकोले नारायण क्याम्पसलाई आइसोलेसन अस्पतालको रुपमा बिकास गरेर सिल गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा. निरन्जन पन्तले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री गुहारियो कर्णाली प्रदेश सरकारले जति बिरामी भएपनि जिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने भन्दै दैलेखका कोरोना संक्रमितलाई सुर्खेत लिन नमानेपछि जिल्लामा अवस्था झनै चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।
सोमबार साँझ सम्म दैलेखमा ९८ जनाको कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ । क्‍वारेन्टाइन भित्र बसेकाहरु पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर बस्न सकेका छैनन्, शौचालय एउटा मात्र छ। २ सय १८ जनाले प्रयोग गर्ने गरेका छन्, स्थान अभाव भएपछि छतमै सुत्नुपर्ने अवस्था आएको क्‍वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको गुनासो छ।
कर्णाली प्रदेशमा इपि सेन्टर बनेको दैलेखमा कोरोना संकट नियन्त्रणबाहिर गएको भन्दै स्थानीय सञ्‍चारकर्मी र नेताहरुले संघीय सरकारसँग गुहार लगाएका छन्। दैलेखमा हालसम्म ९८ जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। जहाँ एकजना संक्रमितको क्‍वारेन्टाइनमा उपचार नै नपाएर ज्यान गइसकेको छ।
कोरोना संक्रमित लगातार बढ्दै गएपछि जिल्लाको स्वास्थ्य संयन्त्रले थेग्‍नै नसक्ने अवस्था आएको स्थानीय अगुवाहरुले बताएका छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता विष्णु रिजालले दैलेखमा कोरोना संकट नियन्त्रभन्दा बाहिर पुगेको बताएका छन्। उनले संकट बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग गुहार लगाइएको बताएका छन्।
‘एकातिर संक्रमित व्यक्ति पनि आइसोलेसनमा नभएको अवस्थामा छ भने अर्कातिर सँगै बसेकाहरुको परीक्षण पनि हुन सकेको छैन’, उनले भनेका छन्, ‘त्यहाँको यथार्थ अवस्थाबारेमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराएका छौं।’ दैलेखको अवस्था जटिल बन्दै गएपछि जिल्लामै पिसिआर मेशिन जडान गर्न पनि माग गरिएको छ।
‘कर्णाली प्रदेशको ठूलो जिल्ला र भारतबाट फर्किने मानिसहरुको संख्या अधिक भएकाले जिल्लामै पिसिआर मेसिन जोडेर छिटो परीक्षण थाल्न आग्रह गरेका छौं’, उनले भने, ‘यो कुरालाई मन्त्रीज्यूले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ। दैलेखलाई प्राथमिकता दिने बचन दिनुभएको छ।’ दैलेखमा संकट बढेपछि आवश्यक औषधीहरु पठाइसकिएको र जिल्लाा दरबन्दी खाली रहेका चिकित्सकलाई तुरुन्तै पठाउने कुरा भएको पनि रिजालले